67 Ha sy Namontana: sarona teo am-pizaram- bola ireo mpanao “kidnapping” | NewsMada
67 Ha sy Namontana: sarona teo am-pizaram- bola ireo mpanao “kidnapping”
Noraisim-potsiny teo am-pizaram-bola, teny 67 ha sy Namontana, ireo jiolahy miisa fito tompon’antoka tamina raharaha fakana an-keriny teratany karana teny amin’ny Villa iray eny Betsizaraina, ny 9 novambra 2018. Nahitana odigasy sy basy PA tany amin’izy ireo…
Olona miisa fito indray voasambotry ny poilisy misahana ny heloka bevava (BC) noho ny raharaha fakana an-keriny teratany karana tompona orinasa iray lehibe eto an-drenivohitra teny amin’ny villa iray eny Betsizaraina, ny 9 novambra 2018 lasa teo. Fanomezam-baovao avy amina olon-tsotra no nahafahan’ny polisy nanara-dia ireto jiolahy ireto ka nahatrarana azy ireo teny 67 ha sy Namontana. “Naheno izahay tato amin’ny BC tamina namana mpitandro filaminana ihany fa misy fakana an-keriny teratany vahiny nataona jiolahy efatra niaraka tamin’ny fitaovam-piadiana. Notazonin’izy ireo an-keriny nandritra ny enina andro io olona io. Ny 15 novambra 2018 lasa teo, nahazo loharanom-baovao indray ny polisy fa misy fizaram-bola ataona jiolahy eny 67 ha. Nanara-dia avy hatrany izahay ka voamarina ny fisian’ireo jiolahy mizara vola eny 67 ha sy Namontana” , hoy ny lehiben’ny polisy misahana ny fikarohana heloka bevava, ny Commissaire principal de police, Randrianirina Manahy. Noraisim-potsiny, araka izany, ireto mpaka an-keriny ireto.
Nidoboka eny Antanimora…
Mbola tratra tany amin’izy ireo nandritra ny fisavan’ny polisy ny volabe nambaran’izy ireo fa amin’ny fianakavian’ilay Karana notazonina an-keriny. Tratra koa ny odigasy marobe sy basy PA iray niaraka tamin’ny bala enina. Niaiky ny heloka vitany izy ireo nandritra ny famotoran’ny polisy ary nitantara antsipiriany ny nanatanterahan’izy ireo izany fakana an-keriny. Nohamarinin’ilay Karana voatazona fa ireto andian-jiolahy ireto tokoa naka an-keriny azy ary nitazona azy tao amin’ilay trano. Voasambotra ihany koa ny lehilahy iray nipetraka tao amin’ny rihana ambony.
Fa nidoboka eny Antanimora, omaly hariva ireo olona telo hafa voasambotra noho ny raharaka fakana an-keriny ihany, ny 13 novambra 2018 teo. Tompona tranombarotra iray no nalain’izy ireo an-keriny ary efa nahazoan’izy ireo vola. Navotsotra ilay Karana taorian’izany. Vehivavy mpivarotra “puce” ny iray sady niray tsikombakomba tamin’ireo mpaka an-keriny.
Mbola fakana an-keriny ihany, voasambotra teo Belo Tsiribihina i Borife, mpanao kidnapping, tompon’antoka tamin’ny fakana an-keriny telo mianaka, nahazoan’izy ireo vola 2 tapitrisa Ar tao Tsimazava Menabe, ny 15 novambra 2018 teo. Notazonin’izy ireo 10 andro izy telo mianaka kanitakiana 20 tapitrisa Ar . Nijanona ho 2 tapitrisa Ar izany taorian’ny fifampiraharahana.